Kekọrịta Njikọ Ịntanetị na Windows Vista
Internet & Network Nduzi & Nkuzi
Otu esi Ekerekọrịta Njikọ Ịntanetị na Windows Vista
Ọtụtụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ọma, na ebe ndị ọzọ na-enye njikọ Ethernet naanị. Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịkekọrịta otu njikọ Ịntanetị na ọtụtụ ngwaọrụ, ịnwere ike iji njirimara Ejikọta Njikọ Ịntanetị na Windows Vista ka ikwe ka kọmputa ndị ọzọ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka gaa online yana. N'ikpeazụ, ịnwere ike ịgbanwuo kọmputa gị na hotspot wireless (ma ọ bụ rawụta wired) maka ngwaọrụ ndị ọzọ dị nso.
Windows XP na ntuziaka Windows 7 maka iji ICS bụ ihe yiri nke ahụ, n'ụzọ doro anya. Otu esi Ekekọrịta Intaneti Ịntanetị (XP) ma ọ bụ Wepụta Njikọ Ịntanetị na Windows 7 . Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị nwekwara ike ịkekọrịta Njikọ Ịntanetị Mac site na Wi-Fi . Ntuziaka ndị a na-ekekọrịta njikọ Ịntanetị jikọọ (kọmputa gị na-ejikọta ya na cable ma ọ bụ DSem modem , dịka ọmụmaatụ) ma ọ bụ modem data 3G dị iche iche arụnyere na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị nwere njikọ Ịntanetị ikuku ịchọrọ ịkekọrịta na ngwaọrụ ndị ọzọ, ị nwere ike Tụgharịa Laptọọpụ Windows 7 gị na Wi-Fi Hotspot na iji Connectify.
Ihe isi ike: Nkezi
Oge achọrọ: minit 20
Lee & nbsp;
Banye na kọmputa Windows kwadoro (nke ejikọrọ na Ịntanetị) dịka Onye nchịkwa
Gaa Njikọ Network na Ogwe njikwa gị site na ịga na Malite> Ogwe njikwa> Network na Internet> Network and Sharing Center wee pịa "Jikwaa njikọ netwọk ".
Right-click njikọ Ịntanetị ịchọrọ ịkekọrịta (dịka, Njikọ Ebe Mpaghara) wee pịa Njirimara.
Pịa Nkọwapụta taabụ.
Lelee "Kwe ka ndị ọrụ netwọk ndị ọzọ jikọọ site na njikọ kọmputa a" nhọrọ. (Rịba ama: maka taabụ na-egosi, ị ga-achọ ịnweta ụdị abụọ njikọ netwọk: otu maka njikọ Ịntanetị gị na onye ọzọ nke kọmputa nwere ike ijikọta, dịka onye nkwụnye ikuku ).
Nhọrọ: Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị ọrụ netwọk ndị ọzọ nwee ike ijikwa ma ọ bụ kwụsị njikọ Ịntanetị, họrọ nhọrọ ahụ. Nke a bara uru maka njikọ netwọk ; ma ọ bụghị ya, ọ ga-abụ na ọ kachasị mma ka enwere nkwarụ
Ị nwekwara ike ịhọrọ ndị ọzọ ọrụ netwọk iji ọrụ na-agba ọsọ na netwọk gị, dị ka ozi ma ọ bụ sava weebụ , n'okpuru nhọrọ Ntọala.
Ozugbo enyere ICS aka, ị nwere ike Ịtọlite ​​Ntanetị Ọrụ Mgbasaozi ma ọ bụ jiri teknụzụ Wi-Fi ọhụrụ karịa ka ndị ọzọ ngwaọrụ nwere ike jikọọ na kọmputa kọmputa gị maka ịnweta Ịntanetị .
Ndị ahịa nke jikọọ na kọmputa ahụ nwere ike ịnwe nkwụnye ihe nkesa ha ka ha nweta adreesị IP ha na-akpaghị aka (lee anya na ihe ntanetị netwọk ahụ, n'okpuru TCP / IPv4 ma ọ bụ TCP / IPv6 wee pịa "Nweta adreesị IP na-akpaghị aka")
Ọ bụrụ na ị mepụtara njikọ VPN site na kọntaktị kọmputa gị na netwọk ụlọ ọrụ, kọmputa niile na netwọk gị ga-enwe ike ịnweta netwọk ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ICS.
Ọ bụrụ na ịkekọrịta njikọ Ịntanetị gị na netwọk ad-hoc, ICS ga-enwe nkwarụ ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị na netwọk ad hoc, mepụta netwọk mgbasa ozi ọhụrụ, ma ọ bụ banye na komputa nnabata.
Windows Vista kọmputa ejikọrọ na Ịntanetị na ntanetị netwọk ọzọ
kọmputa ndị ahịa ndị TCP-IP nyere ma nwee ike njikọ Ịntanetị
nkwụnye netwọk maka kọmputa ọ bụla
modem maka netwọk niile
Otu Ị Pụrụ Isi Chọta Adreesị IP nke Anka Weebụ Naanị ole na ole Clicks
Otu esi edozi ulo gi Wi-Fi Network
Otu esi achọpụta ihe adreesị IP na netwọk na Network mpaghara
Otu esi esi zụta akụrụngwa Network Network maka Home
Debe njikọ Ịntanetị na Windows XP
Kwadoro maka Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ maka IT na Kọmịktị IZIRỊTA
Otu esi ejikọ laptọọpụ gị na ngwaọrụ Bluetooth
Ụzọ iji gosipụta ọsọ ọsọ netwọk
Adreesị IP nke Yahoo
Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere Nintendo 3DS
MBox Mail: Windows Live Hotmail maka iPhone & iPod Touch
Kedu ihe nkwụsị dị mma?
Kedu ihe bụ ID?
Esi esi mepụta Movie Trailer na iMovie 11
Utu abuo nke kachasi abuo nke oma maka ugbo
Nchịkọta Ịde blọgụ si Blog ndị dị elu
Mụta ịchọta nnata nzipu maka ozi na Outlook
5 Ihe atụ nke Technology Biomimetic
Esi ehichapu nchekwa na iOS Mail App
Debanye aha na Jikwaa Pọdkastị Iji gPodder
10 Ulo Nwale Ulo Okpadoro Maka Nyocha Akụrụngwa Stereo
Kedu ihe bụ 'SGTM'? Kedu ihe SGTM pụtara?
Ihe ngosi egwuregwu nke Xbox 360 Ajụjụ
Kedu ihe bụ IPA File?
The Ultimate Windows 7 na Ubuntu Linux Dual Boot Guide
Otu esi eme ka olu na oku vidiyo na Gmail na Google
Mee ka Sun Ray dị na Photoshop
Nkwado Ntughari Uche